CR7 Live Club ဆိုတာကတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတွေကို စုံလင်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ၀က်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Cristiano Ronaldo ရဲ့ Real Madrid အသင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘောလုံးသမား ဘဝရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်း ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရမှာပါ။
ဒီဝန်ဆောင်မှုလေးက Cristiano Ronaldoရဲ့ ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေ၊ သတင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိရှိစေမှာပါ။ အပတ်စဉ်တိုင်းမှာ လည်း ပရိသတ်တိုင်းအတွက် အသစ်အသစ်တွေရှိပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ နှစ်ဘာသာဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
CR7 Live Club ကိုအောင်ပါအတိုင်းစာရင်းသွင်းရယူနိုင်ပါတယ်
7021 သို့ ‘’ ON DAILY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
7021 သို့ ‘’ ON WEEKLY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
7021 သို့ ‘’ ON MONTHLY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
သို့မဟုတ် http://mm.cr7liveat.com သို့သွားရောက်ပြီး ‘’Subscribe now’’ ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အတည်ပြုတဲ့ SMS ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
CR7 Live Club ဆိုတာ ဘာလဲ?
CR7 Live Club ဆိုသည်မှာ ပေါ်တူဂီဘောလုံး ကြယ်ပွင့် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို (ဒိုလေး) ရဲ့သီးသန့်အကြောင်းအရာများ (ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို စသည်) များကိုအမြဲတမ်း လွှင့်တင်ပေးနေတဲ့ နေရာဖြစ် ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဒိုလေး ရဲ့နေ့စဉ်ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊ ဘောလုံးသမားဘဝ တွေကို အချိန်နဲ့အမျှ တပြေးညီသိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများမရိုးရအောင်ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယို များကို အပတ်စဉ်တိုင်းအသစ်လဲလှယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
CR7 Live Club ကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ?
CR7 Live Club တွင် စာရင်းသွင်းထား ခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးများရနိုင်ပါသလဲ?
အကယ်၍ သင်ဟာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်တဦး (ဒါမှမဟုတ်) Ronaldo ရဲ့ ပရိတ်သတ်တဦး ဆိုလျင် ဒီ Portal ဟာ Ronaldo ရဲ့သီးသန့် ဘောလုံးသမားဘဝ၊ သူ့ သူငယ်ချင်း မိသားစုများနဲ့ထိတွေ့မှု၊ သူ့ဘဝရဲအရေးကြီးအခန်းဏ္ဒ္တ္ဋ များ ကို သိရှိနိုင်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုလေးရဲ့ပရိတ်သတ်များအတွက်ဒိုလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံများ၊ဗီဒီယိုများ ကိုအချိန်နဲ့အမျှ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်မစာမျက်နှာ၏ ညာဘယ်တွင် Menu ကို နှိပ်ပြီး English (သို့) Myanmar ကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Portal ၏ ပင်မစာမျက်နှာရှိ စာရင်းပယ်ဖျက်ရန် ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ 7021 သို့ STOP ဟု SMS ပို့၍လည်းပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းငွေလက်ကျန်မလုံလောက်ပါက စာရင်းသွင်းခြင်း အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ရက် ၃၀ ဆက် တိုက် စာရင်းသွင်းခြင်းမအောင်မြင်ပါက CR7 Live Club စာရင်းမှအပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတို့တွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည် ။
CR7 ဆိုက်အတွင်းဝင်ရောက်၍ မိမိစိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ချခြင်းတို့အတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုခ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။